नेपाल भर्सेस सिंगापुर टी ट्वान्टी क्रिकेट : नेपालले पायो ८२ रनको लक्ष्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल भर्सेस सिंगापुर टी ट्वान्टी क्रिकेट : नेपालले पायो ८२ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । मलेसियामा जारी विश्व कप एसिया छनोट अन्तगर्तको बी समूहको छनोट प्रतियोगितामा नेपाल उपाधि नजिक पुगेको छ । शुक्रबार भएको नेपाल र सिंगापुरबीचको खेलमा नेपालले जितका लागि ८२ रनको लक्ष्य पाएको छ ।
टस जितेर पहिला फिल्डिंग गरेको नेपालले सिंगापुरलाई ८१ रनमा अलउाट गर्दै उपाधिको सम्भावना बलियो बनाएको हो । नेपालका लागि सबैभदा सफल बलर एकपटक फेरि सन्दीप लामिछाने बने । उनले ३.३ ओभरमा १६ रन दिएर ४ विकेट लिए । यस्तै सोमपाल कामीले नेपालका लागि शुरुआती दुई विकेट लिएका थिए भने करण केसीले एकै ओभरमा दुई विकेट लिएर सिंगापुरलाई सस्तैमा समेट्न योगदान पुर्याएका थिए । यस्तै ललितनारायण राजवंशीले एक र बसन्त रेग्मीले पनि एक विकेट लिए ।
मलेसियाको क्वाललम्पुरस्थित वायुमास ओभल मैदानमा नेपालले टस जितेर सिंगापुरलाई पहिला ब्याटिंगको निम्तो दिएको छ ।
आजको खेलमा नेपालले प्रदिप ऐरी, आरिफ शेख र ललित भण्डारीलाई आराम दिएको छ ।
नेपालको ब्याटिंगमा विनोद भण्डारी, पारस खड्का र दिपेन्द्र सिंहको नेतृत्व हुने अपेक्षा गरिएको छ । जवाफी ब्याटिंगका लागि नेपालले केही समयपछि ब्याटिंग गर्नेछ । हामी त्यसको पनि लाईभ अपडेट गर्नेछौं ।